दुलहीले बिदाइको बेला गरिन् नौटं, की,बेहुलाद्वारा अच, म्मित हर्कत ! – Ap Nepal
दुलहीले बिदाइको बेला गरिन् नौटं, की,बेहुलाद्वारा अच, म्मित हर्कत !
एजेन्सी । विवाहमा सबैभन्दा भावनात्मक क्षण विदाईको हो । जब विवाहमा सबै कुरा खुसीसाथ चल्छ, तब विदाईमा घरको माहौल नै बदलिन्छ । बिहेपछि केटीले आमाबुवा र घर सदाका लागि छाडेर जान्छिन् । यस समयमा, आमाबाबु र परिवारका सदस्यहरू भावनात्मक हुनु आवश्यक छ।
यद्यपि आजका दुलहीहरू बिदाइको समयमा धेरै रुन मन पराउँदैनन्। आजकल कतिपय दुलहीहरु मेकअप बिग्रने डरले पनि आँसु झार्न मन पराउँदैनन् । त्यसैगरी आजकल रुने प्रचलन पनि घट्दै गएको छ । यस्तै एउटा भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ, जसमा एक दुलही विदाईका बेला रोइरहेकी छिन् ।
भिडियोमा बेहुलाले पहिले दुलहीलाई चुप लगाउन खोजेको देख्न सकिन्छ । यद्यपि दुलही चर्को स्वरले कराइरहेकी छिन् । यसपछि दुलहाले बेहुलीलाई अँगालो हाल्छन् । यसपछि दुलही शान्त भएर बस्छिन् । यो भिडियोलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले निकै हास्यास्पद प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
भिडियो हेरेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले दुलहीलाई नौटंकी भनेका छन् । कतिपय प्रयोगकर्ताले दुलहीको आँसुलाई गोहीको आँसु भनेका छन् । भिडियोको अन्त्यमा दुलहा पनि मुस्कुराएको देख्न सकिन्छ । बेहुलीले नौटंकी गरिरहेको बेहुलालाई पनि थाहा हुन्छ । विवाहको जोडीले उक्त भिडियो इन्स्टाग्राममा अपलोड गरेको छन्।
Prevह्वात्तै घट्यो डलरको भाउ सहित यी बिदेशी मुद्राको भाउ हेर्नुस कु देशको कति ?
Nextतपाँईको आजको राशिफलः बि.स.२०७८ साल पुस २९ गते बिहिबार
आज घट्यो डलरको भाउ सहित यी बिदेशी मुद्राको भाउ ।।
भाइरल सचिन परियारको मेरी बाʼस्सैमा शानदार इ’न्ट्री, सबैलाई यसरी हसाʼए (हेर्नुस् भिʼडियो सहित)
अस्पतालमै विनोद र अनितालाई भाईटिका लगाउन आईपुगे दिदीबहीनी, अस्पतालमा रुवाबा; सी (भिडियो सहित)